Umaki: i-powerpoint slide | Martech Zone
Maka: i-powerpoint slide
Thola isikhungo seGravity for Great Presentation Design
UMsombuluko, May 6, 2019 ULwesihlanu, May 10, 2019 UKory Grushka
Wonke umuntu uyazi ukuthi iPowerPoint ilulimi lwebhizinisi. Inkinga ukuthi, amatafula amaningi e-PowerPoint awalutho nje kochungechunge lwamaslayidi agcwele ngokweqile futhi avame ukudideka ahambisana nokukhuluma yedwa okwethulwa ngabethuli. Njengoba sesithuthukise izinkulungwane zezethulo, sikhombe izindlela ezinhle kakhulu ezilula, kepha ezingavamisile ukusetshenziswa. Ukufeza lokho, sakha i-Center of Gravity, uhlaka olusha lokwethula izethulo. Umqondo ngukuthi idokodo ngalinye, sonke isilayidi, nakho konke okuqukethwe